राष्ट्रपति विरुद्ध अभिब्यक्ति दिने गणतन्त्र विरोधी हुन्, सबै जिम्मा म लिन्छु राष्ट्रपतिलाई दोष नदिनु ओली हिम्मत भए सरकार बनाउनुस् मैले बाटो छोडिदिएँ – Sapana Sanjal
राष्ट्रपति विरुद्ध अभिब्यक्ति दिने गणतन्त्र विरोधी हुन्, सबै जिम्मा म लिन्छु राष्ट्रपतिलाई दोष नदिनु ओली हिम्मत भए सरकार बनाउनुस् मैले बाटो छोडिदिएँ
May 21, 2021 123
साढे २ महिना समय दिँदा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने र नयाँ सरकार बनाउन नसकेको अवस्था त देखेँ नी, दलहरु मिले त एक घण्टामा हुने काम हो । वैकल्पिक सरकार बनाउन सकिन्छ । सांझ सम्म वैकल्पिक सरकार बनाउनु मेरो संधै रचनात्मक सहयोग हुनेछ । सहयोगी भावनाका साथ मेरो दल प्रस्तुत हुनेछ । सक्नुहुन्न भने मलाई समर्थन गर्नु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अकस्मात गरेको पत्रकार सम्मेलनमा शुक्रवार भने, महामारीका विरुद्ध सबै मिलेर सामना गरुँ ।
अन्तराष्ट्रिय रुपमा संकट आएको बेलामा राष्ट्र एक जुट भएर काम गरौं । उनले विहानै आफुले कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाई फोन गरेर सरकार बनाउनुस् भनेर आग्रह गरेको बताए । त्यसो भन्दा मेरो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन पनि आग्रह गरें उनले भने, सबैलाई समेटेर साझा समस्या समाधान खेल्न भुमिका खेल्छु । राष्ट्रिय राजनीतिलाई विभाजन गर्ने तर्फ भुमिका नखेल्न आग्रह गरें ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले आफ्नो निवास बालुवाटारबाट पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । सो पत्रकार सम्मेलनमा आफुले किन राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रसस्त गरेर सिफारिस गरें भन्ने कुराको स्पष्टिकरण दिएका छन् । विश्वासको मत लिन संसद गएँ भने म हार्छु हारे पछि ५ मा नै जाने हो, समय लम्ब्याउनु भन्दा मैले ५ मै जाने निर्णय गरें के यो मेरो कानुन विपरित काम हो ? उनले प्रश्न गरे ।
उनले संसदवाट सरकार दिन सक्ने अवस्थामा नदेखेपछि र आफुले ल्याएका योजनाका काम गर्न नपाउने देखेका बताएका छन् । त्यसरी नै आफुलाई काम गर्न नदिन सबै लागेका कारण संवैधानिक परिधिको चक्रवाट दलले निकास नदिएको र चक्रब्युहमा पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने कुरा उठेको भन्दै उनले आ क्रो श ब्यक्त गरे ।
यो गणतन्त्र विरुद्धको खेल हो, उनले भने, राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतिक हो । राष्ट्रपति माथि यस्ता अभिब्यक्ति दिने काम गणतन्त्र विरुद्ध हो । मलाई विस्थापित गर्ने वाटो खोलिदिएको छु सरकार बनाउनुस् । तर राष्ट्रपतिलाई आरोप नलगाउनुस् । नयाँ सरकार गठनको सिफारिस मैले गरेको हुँ सबै जिम्मा म लिन्छु ।
Prevकाममा निस्किएका श्रीमान सयममै घर नफर्किएपछी उनलाई खोज्न निस्किएकी श्रीमती, न त श्रीमानसँग भेट नै हुन पायो..
Nextदेउवाले आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै १४९ सांसदको नक्कली हस्ताक्षर बोकेर शीतलनिवास पुगेको पुष्टी
स्पेनबाट १४ करोडको स्वास्थ्य सामाग्री आफै ल्याउने प्रथम नेपाली राजदूत दावा फुटी शेर्पा ! [ सम्मान स्वरूप १-१ सेयर गरिदिनुहोला ]